ကျုပ်တို့ မြန်မာ့ယောင်္ကျားဘသား ထိုးကွင်းမင်ကြောင်နဲ့ ကျားကျားယားယား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျုပ်တို့ မြန်မာ့ယောင်္ကျားဘသား ထိုးကွင်းမင်ကြောင်နဲ့ ကျားကျားယားယား
ကျုပ်တို့ မြန်မာ့ယောင်္ကျားဘသား ထိုးကွင်းမင်ကြောင်နဲ့ ကျားကျားယားယား
Posted by မနှင်းဖြူ မှန်မှန်ပြော on Sep 27, 2013 in Creative Writing, Think Different | 50 comments
ဟဲဟဲ … ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ လန်းသဗျို့ .. ဒါပေမယ့် ဆက်ရေးမှာတွေက သိပ်တော့မလန်းလှဘူး
မနှင်းဖြူတစ်ယောက် တစ်ခါလာလည်း ယောင်္ကျားတွေကို ဖဲ့တယ်လို့တော့ မထင်စေချင်ပါဘူးဗျာ
မြင်နေတာလေးတွေ အားမရတာလေးတွေကို ပြောချင်တာပါ ..ဖဲ့တယ်လို့ ယူဆလည်း
စောင်းမြှောင်းပြောတယ်လို့မယူဆစေချင်ဘူး .. ဒဲ့ပြောတယ်သာမှတ်..
ကျုပ်တို့ ရှေးခေတ်က မြန်မာကြီးများဆိုရင် ပေါင်မှာ ထိုးကွင်းမင်ကြောင်တွေထိုးမှ သတ္တိရှိတယ်လို့
ယူဆကြသတဲ့ … ပျိုလေးတို့ ရေခပ်ချိန်များဆိုရင် ခါးတောင်းကိုမြှောက်နေအောင်ကျိုက်လို့ သူတို့
ထိုးကွင်းတွေကို ရှိူးပြပြီး ခြင်းလုံးခတ်ကြတာက လူလုံးပြခြင်းတစ်မျိုးပေါ့ဗျာ ဒါက ရှေးခေတ်တုန်းက
နောက် မြန်မာပြည်ကို ဂျပန်တွေအုပ်စိုးစဉ်ကာလပေါ့ဗျာ .. ဂျပန်တွေက လူကောင်သေးပြီး ပုတက်
ကြလွန်းလို့ ကျုပ်တို့တွေက ဂျပန်ငပုတွေလို့ ခေါ်တာလည်း မှတ်သားခဲ့ရပေ့ါဗျာ …
အဲ …….ခု ကျုပ်တို့ ခေတ်ရောက်လာတော့ …….. အရင်က ကျုပ်တို့ နှိမ်ပြီးခေါ်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်ငပုများကို
ကျုပ်တို့ မြန်မာကျားကျားယားယား ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကြီးတွေက မော်ကြည့်နေရတဲ့အခြေ
အနေကိုရောက်သွားပါလေေ၇ာ ……..ပြောချင်တာက ဘာလဲဆိုတော့
ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်ပြောင်းပြီးသကာလ လူကောင်ပိုပိုသေးကုန်ကြ
မိန်းကလေး တစ်ယောက်အတွက် အရပ် ငါးပေ၄လက်မလောက်ဆိုရင် ဒါက ကျေနပ်နိုင်တဲ့
လက်သင့်ခံနိုင်စရာ အနေအထားပါ ဒါပေမယ့် ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်အတွက်ဆိုရင်တော့
ဒါဟာ ပုတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားထဲမှာပါ ပါတယ်။ ခုဆိုရင် လေ့လာကြည့်ရသလောက် အရပ်
ငါးပေ ၈လက်မကျော်တဲ့သူ တော်တော်နည်းသွားပါပြီ။ နောက် ဘော်ဒီ အချိုးအစားကို ကြည့်ဦး
မလား …… လမ်းထွက်ရင် တောင်မှ ဆေးကျောင်းက အရိုးစုမှတ်လို့ လာ မ သွားမှာစိုးရတဲ့
နောက် ရှေးခေတ်က သတ္တိရှိကြောင်း ပြယုဒ်အနေနဲ့ ထိုးထားတဲ့ ထိုးကွင်းမင်ကြောင်အစား ခုဆိုရင်
တက်တူးတွေ အစားထိုးကြတာပေါ့ဗျာ … ပိန်ညောင်ညောင် ဘော်ဒီမှာ တက်တူးလေးတွေနဲ့
ကြည့်လို့ အားကြီးလှပေါ့ဗျာ .. နောက် နားကပ်လေးများ ၀တ်ထားလိုက်တော့ အမယ်ငှီး ..ကျုပ်တို့
တွေ ငေးရောပဲ .. (ရွဲ့တာ ရွဲ့တာ)
ဒါမျိုးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ ……. အစိုးရကြောင့်လို့တော့ မပြောနဲ့ပေါ့ဗျာ ..
တစ်ခုက အဟာရ ချို့တဲ့ တဲ့အတွက်ကြောင့် .. ငယ်တုန်းကထဲက အာဟာရကို မျှတအောင် မစားခဲ့
တဲ့အတွက်က တစ်ချက်ပေါ့ဗျာ ……. နောက် အရပ်ပုတာက မျိုးရိုးလိုက်တယ်လို့ ပြောလို့ရပေမယ့်
အရပ်ပုပေမယ့် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တောင့်တင်းတဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ကို ရရှိနိုင်တဲ့နည်းတွေရှိပါတယ် ..
အဓိက က ကျုပ်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ပျင်းကြတယ်.. ကျုပ်လည်း
အပါအ၀င်ပါပဲ .. အပြေးလေ့ကျင့်တာမျိုး ၊ ရေကူးခြင်း စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများကိုမလုပ်ကြဘူး
ကျုပ်အခုရောက်နေတဲ့ ခြင်းကြားပူ နိုင်ငံမှာတော့ နောက် ဂျန်နယေးရှင်းဖြစ်တဲ့ ယာင်္ကျားလေး
တော်တော်များများမှာ သင့်တင့်တဲ့အရပ်အမောင်းနဲ့ ခန္ဒာကိုယ်အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီမှာက သူတို့ရဲ့ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကြောင့် အို လယ်ဗယ် ပြီးတာနဲ့ သူတို့
စစ်ထဲကိုသွားကြရတယ်။ အဲဒီမှာ စစ်တပ်က လေ့ကျင့်ပေးတာကြောင့် မလုပ်ချင်လည်း လုပ်ရတော့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကျိုးအမြတ်တော့ရသွားတာပဲ ။ နောက် သူတို့ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာကို
ပျော်မွှေ့ကြတယ်။ မနက်ခင်း နဲ့ ညနေခင်းမှာ လမ်းဘေးမှာ အပြေးလေ့ကျင့်နေတဲ့သူတွေ ၊
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရာနေရာမှာ ဘားတန်းဆွဲနေသူတွေ ၊ ဒိုက်ထိုးလေ့ကျင့်နေသူတွေ ..ခပ်များများ
ကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်မှာတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုတာ တကယ်ကို ခေတ်
မစားတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ တော်တော်များများက လုပ်သင့်တယ်လို့ မယူဆကြပဲ .. အားလပ်ချိန်များ
ကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင် ၊ အရည်မရအဖတ်မရပြော ၊ ဘောလုံးပွဲကြည့် ..ဘာညာ စသည်ဖြင့်
အချိန်ကို ကုန်လွန်စေကြတယ်။ နောက် ခန္ဒာကိုယ်သန်စွမ်းရမယ့် အချိန်ဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၆နှစ်
လောက်ကထဲက ရှူနာရှိုက် ကုန်းဖြစ်အောင် အရက်သေစာနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုတွေကလည်း
တစ်နွယ်ငင်တစ်စင်ပါပေါ့ဗျာ ။ ဘောဒီအချိုးအစားကသာ အဲလိုဖြစ်နေတာဗိုက်ကလေးတွေကတော့
သူ့ထက်ကဲနဲ့ရွှေပြည်စိုး .. အပြိုင်အဆိုင် ဘီယာဗိုက်များနဲ့ပေါ့ဗျာ .. ဒါက ယောင်္ကျားသားများ ပုံစံ ..
ကျုပ်တို့ မိန်းမသားများကို ကြည့်ဦး ……. အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ အပျိုမလေးများကတော့
လှသထက်လှ ၊ဆန်းသထက်ဆန်းအောင် လှပ ၀တ်စားနေကြတာပေ့ါဗျာ … ဒါပေမယ့် ..
မကြာပါဘူး ..အိမ်ထောင်လည်းကျရော ..အလှအပဆိုတာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလား ရန်ဖြစ်ထား
သလားမှတ်ရအောင် ..လှည့်ကိုမကြည့်ကြတော့တာ ..ဘိုသီဘတ်သီနဲ့ .. ဖြစ်သလိုနေ
နေကြတော့တာ … သူတို့ရဲ့ ခေါင်းထဲမှာလည်း လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာမျိုး လုပ်ဖို့ အတွေးကို မရှိတာ
ကျုပ်တို့ အမျိုးသမီးတွေဆိုတာက အမျိုးသားတွေထက် ရုပ်ရည်ကျတာပိုမြန်ကြတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှ မထိန်းသိမ်းမစောင့်ရှောက်နိုင်ရင် ပုံပျက်ပန်းပျက်နဲ့ ဂေါ်ဇီလာကိုခြင်းတပ်ထား
သလိုဖြစ်ကုန်ကြတာများတယ်။ (အော်..ဒါတွေရေးနေလို့ ကျုပ်ကို ပိန်တယ်မထင်နဲ့ …..
ခိခိ .. ကျုပ်က အင်တာနေရှင်နယ် ဟိုက် ..ငါးပေခြောက်လက်မလေးနည်းနည်းစွန်းနဲ့ ဘော်ဒီဝိတ်
၁၃၀ပေါင်တောင်ရှိတယ် သူငယ်ချင်းတွေက ခေါ်ကြတာတော့ ဂေါ်ဇီလာတဲ့ ..
ဒါပေမယ့် ခြင်းတော့ မတပ်ရသေးဘူး..ဟိဟိ)
အဓိက ကတော့ ကျုပ်တို့တွေ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်တယ်.. အလှအပဆိုတာထက် ..
ကျန်းမာရေးအတွက်ပေါ့ …ပိန်တဲ့သူက အသားအရေ ကျစ်လစ်တောင့်တင်းအောင် ၊
၀ သူများကလည်း ကျစ်လှစ်အောင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သင့်တယ်။
လူက အဆီတွေပိတ်လို့ ၀လာရင် ခန္ဒာကိုယ်ကြီးလေးလာပြီး ..ဘာမှ ကောင်းကောင်းမလုပ်ချင်ပဲ
အပျင်းဖက်လာတာပဲ ..(လက်တွေ့ လက်တွေ့ :P) နောက် သင့်တင့်မျှတတဲ့ အစားအသောက်များကို
လည်း စားပေးသင့်တယ်.. ကျုပ်တို့ မြန်မာထမင်းဟင်းများဟာဆိုရင် တကယ်အဆီတက်ပေါ့ဗျာ ..
ဆီစားလို့ အားမဖြစ်ပေမယ့် ….မြန်မာဟင်းများဆို ဆီပြန်လေးမှ စားကောင်းတယ်ထင်လို့ ဆီကို
အိုင်နေအောင် ချက်စားကြတာကလည်း အရိုးစွဲနေပြီ။
အစားအသောက် အာဟာရမျှတအောင်စားလို့ ၊ အရက်သေစာသောက်စားမှုလျှော့ချပြီး သင့်တင့်တဲ့
လေ့ကျင့်ခန်းလေးများ လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ကျုပ်တို့ရဲ့ ပုတုပြီး ရွဲ့နဲ့နေတဲ့ဘော်ဒီများကိုထောက်
မတ်နိုင်လာမယ်လို့ ထင်ကြောင်း .. ကိုယ့်ဟာကို ..လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်ဖို့ အားပေးတဲ့အနေနဲ့
ဒီစာကို ရေးလိုက်ကြောင်းပါဗျို့ …….. မကျေနပ်လို့ ဆဲကြမယ်ဆိုလည်း မြို့မေတ္တာကို ခံယူမယ့်
တိုက်ပုံနဲ့ အချိုးတကျဖြစ်တဲ့ သူမျိုး မင်းသားထဲကို မမြင်ဖူးဘူးးးးး
မီးက မင်းသားတွေထဲမှာလို့ ပြောတာနော်။
ပို့(စ) ပိုင်ရှင် စ ပေးလို့ နည်းနည်း ဝင်ပွါးမိတာ။
ဆဲရင် တူ့ကိုပဲ ဆဲကြပါ။
ဂျာပွန်တွေရဲ့ ပြာပုံကရုန်းထတဲ့ စီမံကိန်းမျိုးလေး စ ကြစို့ရဲ့။
မှန်ပါပေ့ … ဂျပန်တွေရဲ့ စီမံကိန်းက သိပ်ကောင်းပါတယ်
မတော်မရော် .. ကြောင်လျှာသီးတွေနဲ့ ၀တ်စုံပြည့်များဝတ်ထားရင်
ဂင်တိုတို ပိန်ခြောက်ခြောက်နဲ့ အားကြီးကြည့်ရဆိုးတယ် … ဟီးးဟီးးးးးးးးးးး
မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ .. ဒဲ့ ပြောပါသည်..
တိုက်ပုံနဲ့ ..အချိုးတကျ …ဆိုတာ..ကျုပ်ဗျ ..ကျုပ်ကြီးမှ အစစ်…မင်းသားကလဲ မင်းသား….အဟစ်ဟစ်….မယုံရင် ဒါ့ပုံပြမယ်….
အရိုးချည်း ကျန်မှာဘာဗျဲကွယ် …..။
အော် … အနိစ္စ …
မဟာရာဇာအံစာတုံးရယ်.. ကျုပ်ကလည်း ခင်ဗျားကြီးကို မကျေနပ်ချက်နဲ့ သိပ်လိုက်ဦးမယ်
သေတဲ့အခါမှာအရိုးချည်းကျန်တာတော့ လူတိုင်းပေါ့ဗျာ ကလေးကအစသိပါတယ်
မြန်မြန်သေချင်ရင်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ
ဘာရောဂါနဲ့သေသေ အရိုးဖြစ်မယ့်အတူတူ … ခုဟာက
လှဖို့မလှဖို့ထက် အဓိက က ရှူနာရှိုက်ကုန်းမဖြစ်ရေး ကျန်းမာရေးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောတာဗျို့ …
မကျေနပ်ဒါဒွေ တိနေဒယ်လေ …
ရွာထဲ ရန်သတ်ဖက် မချိလို့ လိုက်ချာနေဒါနော် ..
မဟာရာဇာတဲ့ …. တေတွားမယ် ….
ခြောက်တိုင်းကြောက်တဲ့ထဲ မပါတာခက်သဗျာ ..
မကျေနပ်တာကတော့ .. မများပါဘူး ..တစ်ချက်လောက်ပဲ (လက်သီးတစ်ချက်)
တေတွားမယ် … ဘာမှတ်သလဲ ..
ကစ်လိုက်လို့ ခရမ်းသီးပုတ် ကားကြိတ်ထားတဲ့ မျက်ခွက်ဖြစ်သွားမယ်.. ငှဲငှဲငှဲ
အော် … ဟော် .. ဟော် ..
တိတ် မိုက်ဒယ်ပေါ့လေ …
သတ်တိချိရင် ကွန်ပူတာထဲ ဝင်လာဂဲ့ချမ်းဘာ …
ညှင်း .. ညှင်းးး
အံစာ့ကို ပြန်ချဲတာ အားရလိုက်ထာ
ထွာဆိုင်​​လေး​သေးငယ်​ ~~ လူဗိုလ်​ပုံအလယ်​~~~ဒီခါးကို ..​လေတိူးရင်​….ကျိုးမှာကို စိုး တယ်​ ..~~~
တော်သေးတယ်..ကျုပ်ကြီးက ကပ်လွတ်ကလေး…ရှားထဲအထဲပါတယ်…ငါးပေကိုးနဲ့ ..ပေါင် 140 အာဟိ…
ငှဲငှဲငှဲ ကိုယ့်ဘက် ပါတ်မလာခင် ဇွတ်ခံစစ်ကို ကာကွယ်ထားတာ ..
ကျုပ်များ လေးပေ ဒေါက်စီးလိုက်လို့ကတော့ .. ခင်ဗျားကြီးတို့ နေခဲ့တော့ပဲ
ဒေါက်က ဘော်ဒီဝိတ်မခံနိုင်လို့ မစီးတာ..ေိေိခိခိ
အင်း..မယုံနဲ့ …လူမြင်မှ လက်မှတ်လာမထိုးခိုင်းနဲ့ …ချင်ကြားပုက ဟိုအပျိုကြီးကြိုက်တဲ့ ရှမ်းအပွေနဲ့ နာမည်နှစ်လုံးတူတယ်….ဒချိဒချိ
ဒါမှ တို့ဂေါ်ဇီလာကွ။ ဘရာဗို။ ရင်ထဲကပြောချင်တာတွေအကုန်လုံးပြောသွားတယ်။ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်ရေးပြီးရင် စိတ်ဓါတ်ရေးရာအကြောင်းလဲရေးပါ။ အကုန်လုံးကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး။ ရန်ကုန်ပြန်နဲ့တော့ ဂေါ်ဇီလာကို ဖမ်းပြီး တိရိတ်ဆန်ရုံပို့ကြလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင် ဖမ်းပြီးအရေခွံဆုတ် ပြီး အရိုးခြောက်ကို ပြတိုက်ပို့လိမ့်မယ်။
တိန် တိန် တိန် ….ဘယ်သူမှ မဖဲ့ရဘူး .. တူက ဖဲ့တယ်..
ဖုံးထားသမျှ အကုန်ပေါ်တော့မှာပဲ ……….
နွားမေတ္တာစာကြောင့်.. ချစ်တီးနဲ့အမြစ်တွယ်နေတဲ့.. ဟိန္ဒူတွေအချက်ရသွားပြီး.. အမဲသားအစားရှောင်ခိုင်းကြ…
.. အဲဒီကနေ.. သက်သတ်လွတ်တွေဖြစ်… ဟိန္ဒူနဲ့မတူအောင် ပိုကဲပြပြီး.. နို့ပါမသောက်တော့… ဂျုံစားဓလေ့မရှိတဲ့ မြန်မာမျိုးဆက်သစ်တွေခမျာ… ဦးနှောက်အဟာရမပြည့်တဲ့ကလေးတွေနဲ့.. အဟာရပြတ်တဲ့.. ခန္ဓာတွေနဲ့..ဖြစ်ရတယ်ဆိုပါစို့…။
ကလေးဘ၀ မွေးစကနေ အသက်၅နှစ်လောက်အထိက.. အဟာရနဲ့ပါတ်သက်ရင်..အင်မတန်အရေးကြီးတယ်..။ ဘ၀တခုလုံးအတွက် ဦးနှောက်ပြည်မှီမှုက..အဲဒီမှာဆုံးဖြတ်သွားတာ…။
လူသားလိုအပ်တဲ့.. နှူထရေးရှင်း.. အဟာရ.. အစားအသောက်တွေကို ၀င်စွက်ဖက်ပြောသင့်တာ.. ဘာသာရေးပရို(ဘုန်းကြီး)တွေမဟုတ်ပဲ.. အဟာရကျမ်းမာရေးပရို ပညာရှင်.. ဒေါက်တာတွေသာဖြစ်သင့်တာပါ..
အဲဒါကြောင့်.. နွားမေတ္တာစာကို.. ရေမြုတ်ဗုံးတားလိုက်တဲ့.. မင်းတုန်းမင်းရဲ့မင်းဆရာတော်စကားလိုပဲ… မြန်မာ့ခေတ်ပြောင်းစကားကြီးတခွန်းအဖြစ်ထည့်ထားတာ…
How the Brain Develops – Child Welfare Information Gateway
By the age of 3,ababy’s brain has reached almost 90 percent of its adult size. The growth in each region of the brain largely depends on receiving stimulation, …
ဒါတော့မှားသဗျို့ ..ကျုပ် ငယ်စဉ်ကထဲက နွား မစားပါဘူး ..မွေးကထဲက
အိမ်ကမစားတော့ ကျုပ်လည်းမစားတော့ အသက်လေးကြီးပြီး နားလည်လာတတ်တဲ့
ကျုပ်အရပ် ငါးပေ ခြောက်လက်မရှိပြီး ပေါင် ၁၃၀ရှိပါ့သဗျာ
မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းကလည်း ဒီ အရပ်နဲ့ ပေါင် ၁၁၀ကျော်ကျော်ရှိပါကြောင်း
ဒါ့ကြောင့် နွားသားမစားတာနဲ့တော့ ….
နောက်ထပ်-ဘရာဗိုပါ။ဒါမှတို့ ဂေါ်ဇီလာကွ။ သူကြီးထောင်ချောက်ထဲကျမသွားဘူး။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာပြောချင်ရာအကုန်ပြော။ သူကြီးကငြင်းခုန်ခြင်းအနုပညာလို့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတယ်။ ဘာမှမပူနဲ့။
အသိမမှားရင်.. ရှေးမြန်မာကြီးတွေက အင်မတန်သန်စွမ်းပြီး အရပ်ရှည်သဗျ…။
အဲဒီတုံးက အကုန်တီးကြတာပေါ့ဗျာ..။ နွားသားလည်းတီး..။ နွားနို့လည်းသောက်ခဲ့ကြသပေါ့..။ ဘာဗီတာမင်အပိုဆောင်းဖို့မှမလို..။
ဘယ်နှယ်…။ ကမ္ဘာမှာအဟာရအကြွယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး.. နွားတကောင်နဲ့လူရာချီပြီး… အဟာရပြည့် ကျွေးမေးစေနိုင်တာ.. သူ့မစားပဲ..သွားရှောင်တာတော့..
.. နောင်အနှစ်၁၀၀ လောက်ကျရင်.. တော်တော်အူကြောင်ကြောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်နော… ပြောစမှတ်ဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်မိတယ်..။
နွားအသက်တချောင်းရှောင်ပြီး.. စားကြဟေ့.. အသက်တရာသား.. ငါးတွေ..
ဂျကားမစပ်.. တမီးအရပ်ကတော့ ငါးပေ ခွန်ခွဲ.. ပေါင်ချိန်ကတော့ပြောဖူး..
အမယ်ငှီးးးးးးး ပုလဲတစ်လုံး ..လာမည် ကြာမည်..မျော့ .. :hee:
ဒေါက်ဖိနပ် အဝတ်နဲ့ကွယ်…. ဦးကြောင်လိုက်မမှီ ဖြစ်လိမ့်မယ်…။ လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွား လိုက်ဖက်ညီမှ ကြည့်ကောင်းဒါ…။ ဘာရယ်ဟုတ်ဝူး ခုထဲဂ ကြိုပြောထားတာ..။ အိမ်ထဲမှာဂ အကြောင်းဟုတ်ဝူး.. ဝတ်ထားထား ချွတ်ထားထား… အပြင်ရောက်ရင်ဒေါ့ လူကဲ့ရဲ့ အခံရဖို့ ရေးအကြီးဒယ်…။
သဂျီးပေါဒဲ့ အမဲသားကိစ္စလည်း သဘောမတူဗာဗျာ.. အနော်ဆိုလည်း အမဲဒါး အစားဗူး (ခရစ်လေးလည်း အစားနဲ့နော်၊ ဦးကြောင်ထက် အားပိုရှိနေရင် ဒွတ်ခ)။ ငယ်စဉ်ထဲဂ အားကစား၊ ကာယလေ့ကျင့်ခန်း တခုခု စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။ နောက်တခုဂ လူငယ်တွေရဲ့ ရိုးမော်ဒယ် မင်ဒါးမင်းတမီး၊ အဆိုဒေါ်တွေနဲ့ ဆိုင်မလားဗဲ..။ သူတို့က ကျားကျားလျားလျား တောင့်တောင်ဖြောင့်ဖြောင့် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီး လျှာဂျီးနဲ့ရှလွတ်ချင်စရာဆို လူငယ်တွေ လိုက်အတုခိုးပါမယ်။ ဂုဒေါ့ဗျာ မင်းသား၊ အဆိုဒေါ်ကြည့်လိုက်ရင် ငါးဖောင်ရိုးအမျိုးတွေများဒယ်…. ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ လေးဖြူ အိုင်စီအဖွဲ့ဆို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပုံတွေ၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်လည်း အသက်ရလာဒေါ့ ဝိတ်တင်လာတာ သတိပြုမိဒယ်။ ကျန်မင်းသား အဆိုဒေါ် ကြည့်လိုက်ရင် ဘာဗလမှ မရှိဗူး..။ မျက်နှာ မိတ်ကပ်ဖို့ နိုင်ငံဂျားဖြစ် အဝတ်အစား ဝတ်ပြနေဒါပဲရှိဒယ်။ မင်းသာမီး၊ အဆိုဒေါ်ထဲမှာဆို သာဆိုးသေး..။ အင်တာနေရှင်နယ်ဆိုက် အလွန်နည်း၏။ ကိုရီးယားကားတွေ အတုခိုးတယ်သာပြောဒယ်… ကဂျီးမ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် ဘယ်နှယောက် ရှိသနည်း။ အပင်ပန်းမှ မခံဂျင်ဒါ။ ဖင်ဇိမ်ခံဂျင်ဒါဂိုး.. ဖင်ဇိမ်ခံဒါဂလည်း အကြောင်းရှိမယ်…။ ဆန်စားတဲ့ လူမျိုးဖြစ်လို့ အဆီဂ ဖင်မှာသွားစုတယ်။ အစဉ်အလာအရလည်း ဖင်ကြီးတာ ကာလသားများ နှစ်သက်တော့ ဖင်အဆီချဖို့ ပိုခက်သပေါ့..။ ဖင်ကြီးတော့ ပေါင်ကြီး ခြေသလုံးတုတ်၊ ခါးမသေး၊ ရင်ကြတော့ ကြီးမလာဗူး (သောက်ခွီး)။ နင်ဒို့ဒွေ တယောက်မှ ငါ့လှယာနဲ့ အတန်ဗူး…။ ထွီ….
ဦးကြောင်ရယ်. ပိုစ့်ရဲ့ဆိုလိုရင်းက ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ရယ်။ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ဖို့ပါ။ လှတယ်မလှဘူး ထက် ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်ခန်ဒါ ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ပါ။ ကြောင်လျှာနဲ့ လျှက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကြောင်အများစုက ကိုယ့်ကိုကိုယ်လျှာနဲ့လျှက်ပြီးသန့်ရှင်းလုပ်ကြတာပဲ။ရေမှ မချိုးတတ်တာလေ။
အရပ်က ငါးပေခွန်ခွဲလား။ ရှားပါးပဲ။ ချီးကျူးပါတယ် လိုင်းရယ်။ ဒီလိုအရပ်ရဖို့ဆိုတာ ဒီတိုင်းထိုင်နေလို့မရဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ ဖြစ်ရမယ်။ လိုင်းကိုတော့ ဒီတစ်ချက်နဲ့တင် အပြတ်အထင်ကြီးသွားပြီ။
နာနဲ့တူတူပဲ နားပေခြောက်နဲ့ တရာ့သုံးဆယ်…
၀ိတ်လျော့တော့မယ် ၀ိတ်လျော့တော့မယ် ပေါင်ချိန် ၁၃၀…
ပေါင်ချိန် ၁၃၀ သမားတွေက ဝိတ်ကျဖို့ အစားလျော့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ခင်ခ တို့က ထမင်းမစားဘဲ ၇ ရက် နဲ့ မအိမ်မနေ တစ်ပတ် လုပ်ရမလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ။ ခင်ခ တို့ ပေါင်ချိန်စက်ပေါ်တက်လိုက်ရင် ပေါင်ချိန်ပြမျှားက ၁၅၀ ကျော်ကို ဟိုက်စပိနဲ့ကို တန်းရောက်သွားတာဗျ
အပေါ်ကပြော အောက်က ပြန်ဖော် နဲ့
အလေ့အကျင့် ရှိမှ လုပ်ကြတာမျိုး ဆိုတော့
အလေ့အကျင့် ရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပ
ဆိုင်ကယ်လေးပေါ် တက်တက် ခွရင်း
အစိုးရစည်ပင်မှ သားသတ်လိုင်စင်ကို သံဃာများက သိန်း ၂၀၀ ကျော်ဖြင့် လေလံဆွဲခဲ့ကြောင်း တိုင်းသံဃနာယက ဆရာတော် ဦးဝံသပါလ မိန့်ကြား
ကျိုက်လတ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၅
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်လုံးကျွတ် အမဲသားသတ် လိုင်စင်များကို ယခုနှစ်အတွက် သံဃာတော်များက န၀ကမ္မငွေများဖြင့် စုဆောင်း၍ လိုင်စင်ဆွဲယူခဲ့ကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်း သံဃာ့နာယက အဖွဲ့ဝင် ကျိုက်လတ် ကံကျောင်းဆရာတော် ဦးဝံသပါလက မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ မိန့်ကြားသည်။
ဆရာတော်က ““သိန်း ၂၀၀ ကျော်တယ်။ စည်ပင်ကို သွင်းလိုက်တယ်။ ဘေးမဲ့ပေါ့။ ဒီကျိုက်လတ်မှာ အမဲသားမရှိဘူး။ မရှိဘူး ဆိုတာကတော့ ရှိတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒိုင်လျှိုလေးတွေ ကျတော့ ငါတို့လည်း မလိုက်နိုင် ဘူးလေကွာ။ ကျေးရွာကနေ အသိပေးရင်တော့ ချက်ချင်း ဆင်းဖမ်းတယ်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ပေါင်းပြီး ရိုက်စားနေရင်တော့ တို့လည်း မသိဘူး။ တစ်နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒီနှစ်မှစတာ။ ငါတို့က သတ္တ၀ါတွေ ကယ်ဆယ်တာပေါ့ကွာ။ အကျဉ်းချုပ် ငါပြောမယ်။ အခြေခံလေး အကျဉ်းချုပ် ငါပြောမယ်။ ဒီဗလီကနေပြီးတော့ မနှစ်က တစ်ခုပြောမယ်၊ မနှစ်ကတုန်းက သူတို့ ဘယ်လောက်နဲ့စလဲ ဆိုတော့ ဆယ်ကောင်တော့ ကျော်တယ်။ သတ်တာ။ နောက်ဆုံးနှစ်က နှစ်ဆယ့်တစ်ကောင်။ နောက်ကျတော့ အကောင်ရေက ငါးဆယ်ကျော်လာရော။ လမ်းဘေးဈေးရောင်းတဲ့သူ တွေကလည်း တစ်ကောင်၊ နှစ်ကောင်၊ အဲလိုတွေ ဖြစ်လာတော့ ဒကာတွေ၊ ဒကာမတွေ ကလည်း လျှောက်လာတယ်။ လျှောက်လာခဲ့တဲ့ အခါကျတော့ ငါတို့ကလည်း အဲဒါကို လုပ်နိုင်၊ မလုပ်နိုင်၊ သတ္တ၀ါတွေကို ကယ်ချင်ပေမယ့် ကယ်နိုင်၊ မကယ်နိုင် ပြန်စဉ်းစားရတယ်။ နောက်ပိုင်း ညှိနှိုင်း လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ကယ်နိုင်တဲ့အဆင့် ရောက်တဲ့အခါကျတော့ စည်ပင်နဲ့ စကားပြောရသေးတယ်။ အများကြီး။ စည်ပင်က မပေးချင်ဘူးဆိုတာက …သံဃာတွေကနေ ဒီလေလံကို ယူလိုက်ပြီဆိုရင် လာမယ့်နှစ်ကျရင် ကြမ်းခင်းဈေးကလည်း တက်လို့မရဘူး။ အပြိုင်အဆိုင်တွေလည်း မရှိတော့ဘူး။ သူတို့ဘတ်ဂျက် လျော့သွားပြီ။ တကယ်လို့ ပုဂ္ဂလိကတစ်ယောက်က ဆွဲတယ်ဆိုရင် ဈေးပြိုင်တက်ရင် သူ့အတွက် လာဘ်လာဘရှိတယ်။ သူတို့က ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်းလဲ မသိဘူးရတယ်။ အခုဆွဲလိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ဒါအလှူဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့အတွက် လာဘ်လာဘလည်း မရှိတော့ဘူး။ နောက်နှစ်ကို စင်ပြိုင်လည်း မရှိတော့ဘူး။ အဲလိုဖြစ်သွားပြီ။ မဆွဲခင်က လေလံရှင်တွေ ရှိပေမယ့် ဒီလေလံကို လေလံ မတင်ဘူး။ ဘုန်းကြီးတွေက စည်ပင်နဲ့ ညှိပြီးတော့ မေတ္တာရပ်ခံ လိုက်ပြီးတော့ မနှစ်က ဈေးနဲ့ ယူလိုက်တာ။ အမှန်ဆိုရင် တကယ့်မူရင်းဈေးက အဲလို သိန်းရာချီ ပေးစရာမလိုဘူး။ တကယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်အဆင့် ဆွေးနွေးပြီးတဲ့ အခါကျရင် လေလံဈေးကို လျှော့ချပြီးတော့ ယူလို့ရတယ်။ အခုက သိန်း၂၃၀ ဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံက နည်းတာ မဟုတ်ဘူး။ အရင်နှစ်က နောက်ဆုံး လေလံဈေးကလည်း အဲလောက်မမြင့်ဘူး။ တိုင်းကနေပြီးတော့ တစ်ဝက်။ ဦးသိန်းအောင်ပေါ့။ ၀န်ကြီးချုပ်က ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ပေးတာ။ တို့က တစ်ဝက်။ ငါတို့တစ်ဝက်က တစ်နှစ်တာ ပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက် နောက်တစ်နှစ်တာလည်း ပြည့်စုံလောက်တယ်။ ၇၀၊ ၈၀ လောက်ရတယ်။ ငါတို့က ၉၃ အုပ်စု အကုန်လုံး တစ်အုပ်စုကို ငါးသောင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အခြေခံပြီးတော့ အလှူခံတာ။ တစ်ဦးတည်း သုံးနှစ်စာ လှူတာတွေတောင် ရှိတယ်။ သူတို့လည်း အားတက်သရော စိတ်ပါဝင်စား စွာနဲ့။ ဆိုတော့ တို့က အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေတာပေါ့။
တို့ကျေးရွာတွေ ဆင်းပြီးတော့ စည်းရုံးရေးတရားဟောတယ်။ လယ်တီ ဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ပေးရ တယ်လေ။ ကျိုက်လတ်သား မှန်ရင်ပေါ့။ အမဲသား လှူပြီးသား ဖြစ်ရမယ်။ဧရာဝတီမှာ မအူပင်ရှိမယ်။ ဖျာပုံရှိမယ်။ ဒေးဒရဲရှိမယ်။ ဘိုကလေးရှိတယ်။ ကျိုက်လတ်က နောက်ဆုံးကျ တာပေါ့။ မော်ကျွန်းရှိတယ်။ တို့ကျိုက်လတ်မှာဆိုရင်တော့ လေးမြို့နယ်လုံး ရှိတယ်။ ဖျာပုံခရိုင် လေးမြို့နယ်လုံး ရှိတယ်။ပုသိမ်တို့ ဘာတို့ကျတော့ မပါသေးဘူး။ ပုသိမ်က သိန်းထောင်ချီတယ်။ ၁,၂၀၀ လား၊ ၁,၄၀၀ လားမသိ ဘူး”” ဟု မိန့်ကြားသည်။
စုပေါင်း၍ န၀ကမ္မများ စုဆောင်းထားသော မြတ်စေတနာ သံဃာအဖွဲ့တွင် ဦးဇဋိလ-ပ/ဥက္ကဋ္ဌ (နန္ဒ၀န်ကျောင်း ဆရာတော်)၊ ဦးစက္ကိန္ဒ-ဒု/ဥက္ကဋ္ဌ (စခန်းကြီးကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးပိဏ္ဍောလ-ဒု/ဥက္ကဋ္ဌ (ရှမ်းကျောင်း ဆရာတော်)၊ ဦးဝံသပါလ-အတွင်းရေးမှူး (မင်္ဂလာကံကျောင်း ဆရာတော်)၊ ဦးနန္ဒောဘာသ (ဇေတ၀န်ကျောင်း ဆရာတော်)၊ ဦးဝိလာသ (မှန်ကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးကုသလ (ဇေယျာသီရိကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးဝိမလ (ဓမ္မပါလကျောင်း ဆရာတော်)၊ ဦးပညာတိက္ခ-ဘဏ္ဍာထိန်း (မစိုးရိမ်ကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးနန္ဒိကသီရိ (၄ လမ်းကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးနန္ဒိယ (ကံသာအေးမဟာစည် ကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးစန္ဒဇောတိ (ပစ္ဆိမာရုံကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးရေ၀တ (ဃောသိတာရုံကျောင်း ဆရာတော်)၊ ဦးပဏ္ဍ၀ (မငေးကျောင်း ဆရာတော်)၊ ဦးအာစာရသီရိ (စတုဘုမ္မိက ကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးနန္ဒိယသီရိ-ဘဏ္ဍာထိန်း (ပညာ ဇေယျုံကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးပညိန္ဒ (မြို့မကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးဓမ္မပီယ(ဓမ္မိကာရုံကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးပညာသာမိ (တဘိုးကုန်းကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးအာစိဏ္ဏ (မှန်ကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးဓမ္မသုခ (မှန်ကျောင်းဆရာတော်)၊ ဦးပညာသီရိ (ရွှေသားကျောင်း ဆရာတော်) တို့ ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သိရသည်။
((((တိုင်းကနေပြီးတော့ တစ်ဝက်။ ဦးသိန်းအောင်ပေါ့။ ၀န်ကြီးချုပ်က ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ပေးတာ။ တို့က တစ်ဝက်။))))
ဘုန်းကြီးတွေက (ဘုရားအဆုံးအမမဟုတ်ပဲ သူ့တို့ဘာသာသတ်မှတ်ထားတဲ့) သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်တာကို
လူ က ဘာလို့ လူ အလုပ်မလုပ်ရတာလဲ…..
ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူး ဆိုတာ အဲဒါမျိုး…….
အားကစား မလုပ်ဖြစ်တာ လူတွေ အပြစ်ကြီးဘဲတော့ လည်း မဟုတ်ဘူးဗျ။ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ က သင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့ ၀န်းကျင် တစ်ခုလည်း ဖန်တီးပေးထားရမယ်။ နယ်တွေမှာတော့ သိပ်မပြောတတ်ဘူး။ ရန်ကုန်မှာက နေရာကို မရှိတာ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆို ရပ်ကွက်ထဲ ကိုယ်တွေက ဘောလုံးသိပ်ကန်ချင်တာ။ နေရာမရှိတော့ လမ်းမပေါ်ဘဲ တက်ကန်ရတာပေါ့။ တခါတလေဆို အနီးအနားက အိမ်ရှင်တွေ ကြိမ်းမောင်းခံရသေးတယ်။ မကောင်းမှန်းတော့ သိတာပေါ့ဗျာ။ ကလေးသဘာဝ ဆော့ချင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဆော့စရာမြေကို မရှိတာ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ဂိမ်းတွေပေါ်လာတော့ တော်တော်များများက ဂိမ်းဆိုင်ဘက် လှည့်သွားကြရော။ ကျောင်းတွေမှာလည်း ဒီအတိုင်းဘဲ ဆော့ ချိန်ကို သိပ်မရှိဘူး။ ကာယ ဆရာ၊ဆရာမ ဆိုတာလည်း ဟန်ပြလောက်ဘဲ။ အခုနောက်ပိုင်း ဂိုက်စနစ်တွေ၊ ဒဘယ် ကျူရှင်တွေနဲ့ဆိုတော့ လူငယ်အများစုက အားကစားဘက်ကို ပါမလာကြတော့ဘူး။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ နွားနို့က ဈေးကြီးတယ်ဗျ။ :hee:
နွားနို့ကဈေးကြီးရုံတင်မကဘူး ရေကိုနွားနို့အရောင်ခတ်ထားတာကို သောက်နေ၇တာဗျို့ ..ဆိုးချက်..
နေရာကျဉ်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း .. ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်တော့ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
ဘယ်လီရိုက်တာမျိုးဆိုရင် နေရာသိပ်မယူဘဲ ရနိုင်တာမျိုးပါ။
အားကစားဆိုတာ ဘောလုံးတစ်ခုတင်တော့မဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ့်ခန္ဒာကြံ့ခိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ခန်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
ကိုဆိုလိုချင်တာပါ. ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို အဓိကရေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က လူငယ်တွေအားကစားလုပ်ဖို့ ၊ လူကြီးတွေဆိုလည်း မနက်လမ်းလျှောက်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ကိုရည်ရွယ်တာပါ။
အမဲသားနဲ့ပါတ်သတ်လို့ အငြင်းတွေပွားနေကြပေမယ့်လည်း ……… ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်ကတော့
အမဲသားစားမှ အဟာရပြည့်တာမဟုတ်ဘဲ အခြားအစားထိုးအဟာရတွေလည်းစားလို့ရပါတယ်။
အဓိက က အဟာရဖြစ်မယ့်အစားအစာအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့ပါပဲ။
ဥပမာ .. သတ်သတ်လွတ်စားသူတွေ အဟာရပြည့်ဖို့အတွက် အသားဓါတ်ပြည့်ဖို့အတွက် သူတို့ဟာ
ပဲနုိ့ ၊ တိုဖူး စသည်များကို ပိုမိုစားပေးကြရသလိုမျိုးပေ့ါဗျာ …….
အမဲသားစားမှ အားပြည့်ပြီး ခန္ဒာကိုယ်ကြီးထွားကြံ့ခိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ လုံးဝ လုံးဝ လက်သင့်မခံနိုင်ပါ။
နောင် နှစ်တစ်ရာဆိုရင် နွားကို အခုလိုသတ်မစားလောက်တော့ဘူးဗျ..
သတ္တဝါတွေရဲ့ ဆဲလ် တွေ ကို ဆဲလ်ဥယျာဉ်မှာ မွေးပြီး အသားထုတ်မှာ။
အဲဒီအခါကျရင် အခုလို ပြဿနာနည်းသွားလောက်ပြီ။ သို့သော်..
ဆယ်လီဗျစ်တီ တွေရဲ့ ဆဲလ် ကိုဝယ်ပြီး မွေးမြူတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်
တာပေါ့။ ဆိုတော့ လူသားပါ စားလာလိမ့်မယ်။ ဥပမာ..သဉ္ဇာဝင့်ကျော်
တစ်ပွဲ တို့ ဘာညာ ..အဲဒီလို ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲဒီအချိန်ကျလည်း ဆက်ပြီး
ပြီးခဲ့တဲ့တရက်ကတင်.. မွတ်စလင်တယောက်က.. ဟာလာအသားစစ်ဟုတ်မဟုတ်… စစ်တဲ့စက်ကိုထီထွင်တာ… အခုတော်တော်အ၀ယ်လိုက်နေတယ်တဲ့..
ကြားထဲ.. ၀က်အင်ဇိုင်းပါ/မပါ စစ်တဲ့စက်ကပါရှိနေပြီး.. အင်မတန်ရောင်းကောင်းနေတယ်..။
အမဲသားဆိုတာ.. ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိပ်. ဘာညာတွေနဲ့..အဟာရရှိတဲ့.. အစိုင်အခဲတခုလို့မမြင်နိုင်ပဲ..
ဤသည့်စားဖွယ်၊ အမယ်မယ်ကို၊မြူးရယ် မာန်ကြွ၊ လှပ ရေဆင်း၊ပြည့်ဖြိုးခြင်းငှါ၊
အသက်မျှတမ်း ၊မမောပန်းညှား၊ ဘုရားသာသနာ၊ကျင့်နှစ်ဖြာကို၊ကျင့်ပါနိုင်စေ၊
ဝေဒနာဟောင်းသစ်၊ မဖြစ်စေရ၊ ယာပိုက်မျှလစ်၊ခပ်သိမ်းပြစ်ကို၊ မဖြစ်စေအောင်၊
မမြင်မတွေးပဲ.. ဗုဒ္ဓ-ဟိန္ဒူပေါင်းကူးဘာသာလုပ်ပြီး.. အူကြောင်ကြောင်တွေးနေသမျှ… ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေတွန်းတင်အစွန်းရောက်တာကို လိုက်လုပ်နေကြသမျှ.. ဒီဘ၀..ဒီမျှနဲ့.. လွတ်လမ်းရယ်လို့.. တယ်မမြင်မိပါဗျာ…။
“ဤသည့်စားဖွယ် အမယ်မယ်ကို…. ” ဆိုလို့ရှိရင် သက်သတ်လွတ် အစာကို ဘာကြောင့် လိုက်ရှုံ့ချနေရသလဲ အယာတိုလာ ခိုမ်မေနီရဲ့….။ တရားဆင်ခြင်ပီး စားလိုက်ပေါ့ နောက်ဆုံး ချီးဖြစ် မြေဂျီးထဲ ပျံရောက်သွားဒါဗဲဟာ…။ မာမွတ်ခိုမ်ဒို့လို လိုရာဆွဲတွေးတဲ့ လိပ်မျိုးဒွေကြောင့် ကမ္ဘာဂျီးမှာ ပြသနာပေါင်းစုံ တက်နေတာ..
နောင်နှစ်တစ်ရာဆိုရင်တော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်လည်း ဂိန်လောက်ပါပြီ။
ကျုပ်ကိုလည်း နှစ်တစ်ရာထိတော့ ဆက်ပြီး မငြင်းခိုင်းပါနဲ့ ။
အဲလောက်လည်းအသက်မရှည်နိုင်သလို မရှည်ပါရစေနဲ့ခင်ဗျာ ..
ပေါင်120ရှိတယ်တော့ ဒါတောင် ၀ချင်လို့
တစ်နေ့ကို ထမင်း သုံးဗူးချက်စားတယ်..
ဒါလည်း ဒီထက်ပိုပြီး ၀မလာဘူး.
ငါးပေငါးနဲ့ တစ်ရာ့နှစ်ဆယ် တော်ပြီလေ…ဘယ့်နှယ့် ..နပန်းသတ်မို့လား …အဟိဟိ
အင်းးအမဲသားကို ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကျော် အထိမစားခဲ့ဘူး။ အဲ့တော့မေမေက ဟင်းချက်ဖို့စီစဉ်ရတာဒုက်ခရောက်ရော။ကိုယ်လဲမစား သူတို့ကိုလည်းမစားဖို့စည်းရုံးပေါ့။ အခုတော့ပြန်စားတယ် တစ်ခါတလေ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် သင်းဘော နဲ့ပင်လယ်ထဲထွက်တော့ ရှောင်မရဘူး အီတလီယန်း စားဖိုမှူးက အမဲသားချက်တာ များတယ်။ သူတို့ အသားတွေ နို့တွေ ချိစ်တွေ အရမ်းစားတယ်။ သံလွင်ဆီပဲ သုံးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အနောက်တိုင်းသားတွေထွားကျိုင်း တာဖြစ်မယ်။ ယေဘုယျလက်ခံပါတယ်။ ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပုံလည်း ပြောင်းလဲသင့်တယ်။ အာဟာရပြည့်ပြီး စားကောင်းအောင်။ သူတို့က ကိုယ်ကုန်နိုင်သလောက်ပဲစားတယ်။ အမဲသားစားသင့်မစားသင့်ကိုဝေဖန်ရရင်တော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်ပြုတ်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝမယ်ဆိုရင်တော့နောက်မျိုးဆက်ကိုစားပါလို့တိုက်တွန်းချင်တယ်။ မစားဘူးဆိုလည်း သူ့ရွေးချယ်ခွင့်ကို လေးစားပါတယ်။ အဲ့ဒီက ရတဲ့အာဟာရနဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကို အားပြုပြီးအလုပ်ကိုနှစ်ဆတိုးလုပ်ကြပါလို့။ အနောက်တိုင်းသားတွေ အရမ်း အလုပ်လုပ်လွန်းတယ်။ ပြသနာရှိရင် ချက်ခြင်းအဖြေရှာ.ချက်ခြင်းရှင်း။
အခုခေတ်ကောင်လေးတွေပိန်သမှ ဘော်ဒီဖစ်ဆိုတဲ့အင်္ကျီကို L ဆိုဒ်ကိုပွနေလို့ဒဲ့။ ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ့်သား ၁၀ နှစ်ကတော့ XL ၀တ်နေရတယ်။ လူပျိုပေါက်ကလေးတွေက L ဆိုဒ်တောင်မတော်။ ဘောင်းဘီခါးဆိုဒ်ကော ၂၇ ကိုပွနေလို့တဲ့။ ဒီ့ထက်သေးတာမရှိဘူးလားတဲ့။ ကိုယ့်သားတောင် ၃၀။ အဲလောက်ကိုသေးကွေးလွန်းလို့အားမရဘူးတကယ်။ ကောင်မလေးတွေကျတော့လဲ ပိန်လိုက်တာ အရိုးပဒေသာ။ ၀လိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေကျတော့လဲ ကိုယ်တွေတောင်တအံ့တသြငေးယူရလောက်အောင်ဖက်တီးဘုတ်တွေ။ အားကစားဆိုတာလုံးဝမရှိ်။ တကယ့်ကိုအားမရပါဘူး။
အင်းး စာသင်ကျောင်းက ပြန်စသင့်တယ်။ ကျမတို့ အလယ်တန်းတုန်းအထိ ကျောင်းတွင်း ကျောင်းပြင် အားကစားပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်။ အချို့အားကစားတွေ က အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ ပူးပေါင်းဆာင်ရွက်တတ်စေတယ်။ အဲ့ဒီတော့ တစ်ကိုယ်တော်ဟီးရိုး တွေလည်း နည်းသွားမယ် ထင်တယ်. ဟီးဟီးး
မအူပင်မှာလည်း အမဲသားလိုင်စင်ကို သူဌေးတစ်ယောက်က ၀ယ်သွားလို့ အမဲသား မရတော့တာ တစ်နှစ်ကျော်ပါပြီ။
အမဲသားကို မစားပေမယ့် စားခွင့်ရှိတယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ကိုယ်က သားမွေးလိုက်တော့ ခလေးရှေ့ရေးအတွက် အမဲသားကျွေးရမယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဒါနဲ့ အမဲသားကျွေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာမှ အမဲသားက မရှိတော့တာ။ အမဲသားကျွေးချင်တာတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ အမဲသားက ဈေးအပေါဆုံးပဲ။
နောက်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပွဲတွေမှာ သူများနိုင်ငံက ခလေးတွေ စင်ပေါ်တက် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တိုင်း ကိုယ့်ခလေးက မော်ကြည့်နေရမှာ စိုးလို့ပါ။
အမဲသားကိစ္စမှာ သဘောထားကွဲလွဲပေမယ့် ဒီပို့စ်တစ်ခုလုံးကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ် ပို့စ်ပိုင်ရှင်ရေ (ကျားလား မလား မသိလို့ပါ)
မ ဗျို့ … မ …
မ မှ မမ ဝ ဝ …
ဝိုင်းစုလေးရဲ့ သီချင်းထဲကလိုပေါ့ ချာမရယ် … ဟီဟိ
အံစာတုံး လှိမ့်လှိမ့်ကန်ထားလို့ မျက်နှာခြောက်ဖက် ချိုင့်တွေ ဖြစ်နေတာ
မမှတ်သေးဘူးထင်တယ်… ဘာ ၀ ၀ တုံး ………
အင်တာနေရှင်နယ်… ဘော်ဒီကွ.. ဟွန်းးဟွန်းး…
ဟုတ်ပါ့မလား ကိုအံရယ်။ သူ့နာမည်က မနှင်းဖြူ ဆိုပေမယ့် ပြောပုံက ယောက်ျားလို၊ မန်းသူများလားလို့လည်း စဉ်းစားနေရသေးတယ်။
ထားပါတော့ မနှင်းဖြူရေ … ၀င်ပြောချင်တာလေးတွေကျန်ခဲ့လို့။ ခုခေတ် မိန်းကလေးတွေ တကယ်ပဲ အရပ်အမောင်းက လူစဉ်မမီဘူး။ ကြည့်လို့ ရှုလို့ မကောင်းအောင်ကို ပုတယ်။
အမဲသားကိစ္စ မဟုတ်ပေမယ့် ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ အမဲသားက တစ်ဆယ်သား ၄၀၀၊ ဆိတ်သားက ၈၀၀၊ ဈေးရှိတယ်။ အမဲသတ်လိုင်စင်ကို သူဌေးဝယ်လိုက်ပြီးတော့ မြို့ပေါ်မှာ အမဲသား လုံးဝ မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆိတ်သားက တစ်ဆယ်သား ၁၂၀၀ ဈေးဖြစ်သွားတယ်။ အမဲသားက နဂိုကတည်းက ကိုယ်နဲ့ ပြတ်စဲထားတာ။ မိဘအိမ်မှာတုန်းက လုံးဝမစားခဲ့ရဘူး။ ခုတော့ ဆိတ်သားနဲ့ပါ ကွာရှင်းလိုက်ရပြီ။ အဲဒါ ဘယ်သူတရားခံတုန်း။ ကျေနပ်ဘူးကွ။
မိန်းကလေးပါ ဆရာမရေ ……
အဲလိုပဲ ပြောတာ ရေးတာအကျင့်ပါနေလို့ပါ..
နောက်…..မှန်ပါ့ … ကျွန်တော် မန်းသူလေးပါ..
မိန်းကလေးအရပ်အမောင်းမမှီတာက … တအားပုတာတွေကလွဲရင် ၅ပေ၄လောက်ဆိုရင်
၅ပေအထက်ဆိုရင် ကြည့်ကောင်းနေပါပြီ..ယောင်္ကျားလေးက သေးသေးညှက်ညှက်ဖြစ်နေရင်တော့
ပိုဆိုးပါတယ်..ခုဟာက . တော်တော်များများ .ယောင်္ကျားလေးတွေပါ ၅ပေ၄လောက်က အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေကြတော့လည်း… .. ၅ပေ၆လောက်တော့ အနည်းဆုံးရှိသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေကြတော့လည်း အချို့ သဘောတွေက အတော်ဂွကျသဗျ
ကျုပ်တို့ဆို ချာတိတ်တုန်းက လက်မှာ ဇွဲတို့ သတ္တိတို့ ရေးထားမှ ယောက်ျား ဆိုပြီး
ကျုပ်တို့ ဘသားချောတွေအားလုံး ဇွဲသတ္တိကိုယ်စီနဲ့ပေါ့
လက်မောင်မှာ ကြယ်တွေဘာတွေထိုးပြီး ဗိုလ်ကြီးလုပ်တဲ့ကောင်ကရှိလိုက်သေး
( အမှန်တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျ )
တောရွာတွေမှာတော့ အမျိုးသမီးအတော်များများဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီးသွားရင်
ဘတ်လတ်ဘတ်လတ် လုပ်ကုန်ကြရော ( ဒါကဘဲဓလေ့လိုဖြစ်နေပြန်ရော )
လူတစ်ယောက်ဟာ အကောင်ကြီးတာနဲ့ ခန္ဓာကို အချိုးစားကျတာဟာ မတူဘူး
ဒါ့ကြောင့် လူတိုင်း ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေး အနည်းနှင့်အများတော့ လုပ်သင့်တယ်
ကုတင်တို့ သဘောင်္ာတို့ လှေကားတို့ မီးသီးတို့ ကိုတော့
နာမည် : ဆောရိုး
အရပ် : ငါးပေကိုး
ခါးဆိုဒ် : 33 လက်မ
အသား : ညိုညိုစိုစို
မျက်လုံး : အညိုရောင်ဖျော့ဖျော့
၀ိတ် : 140 ပေါင်
ဘော်ဒီ : နင်ဂျာအဆက်ဆင်း ထဲက ရိန်းကိုယ်လုံးမျိုး
အခွက် : ပက်စက် ခန့်သည် ။
ရုပ်ရည် : ဇက်အက်ဖရွန်ရုပ်နဲ့ ဆင်တင်တင်
အာဟိ ….ယောက်ျားတွေဘက်ကမခံချင်လွန်းလို့ တော်လှန်ပေမယ့် အနေသာကြီး …
ကျုပ်ကြီးက မြန်မာမဟုတ် …ကချင် အဟိဟိ